UYILO LWENDLU YANGASESE ENTOFONTOFO (ICANDELO 2) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Uyilo lweNdlu yangasese eNtofontofo (Icandelo 2)
Le galari ijolise kwimibono yoyilo lokuhlambela ukukunceda ukuba wenze eyona ndawo ingcwele yakho. Igumbi lokuhlambela eligqibeleleyo kufuneka libonelele ngendawo yokuphumla ukuze ukwazi ukubaleka kusuku lwakho kubomi bemini. Nokuba uyakuthanda ukungena ebhafini enkulu, okanye ukonwabele ukuziva ubumnandi bemvula yokuqubha ezi zinto zikunika into. Le yinxalenye yesi-2 kwigalari yemifanekiso emi-3. (Cofa apha ukuze ufumane Uyilo lwegumbi lokulala Iingcamango Icandelo 1 kwaye ndilapha Uyilo lwegumbi lokuhlambela Icandelo 3 )
Le yangasese yangoku idibanisa imibala emnyama kunye nemibala eqaqambileyo nehlaziyayo. Ukwahluka kweetera zamalahle zekherale kunye nepeyinti eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nokukhanya okuthe tyaba kweenkuni umgangatho weethayile kuyamangalisa kwaye kuyanomdla, kudala isiphumo sokuba igumbi lokuhlambela lahlulwe ngokupheleleyo laba ziindawo ezimbini ezahlukeneyo. Indawo ekhanyayo kukungena kunye nendawo engento eneetayile ezimhlophe zodonga kunye ne-beech counter vanity counter, kwaye indawo emnyama yindawo yokuhlambela neyeshawari.
Le ndlu yangasese isebenzisa indibaniselwano yezinto zakudala kunye nezixhobo zangoku zokwenza oku kujongeka. Emgangathweni nasezindongeni kukho iithayile zendalo zamatye e-beige ezinemigca egxininisayo yeethayile zemosa, inika eso sibheno sihle kwaye sihle. Kwelinye icala, amampunge kunye nokugcina kuyavalwa kusetyenziswa isipili esimnyama, ikakhulu kubangelwa kuyilo lwangoku. Indibaniselwano inomdla, inika enye indlela yeklasikhi kunye nembonakalo elula yokuhlambela ijongeke ngakumbi.
Le ndawo yokuhlambela entle ilungele ubukhosi. Umdibaniso wokugqitywa kwezinto ezintle kunye nezixhobo unika esi sibheno sasebukhosini nesibiza kakhulu. Ukusuka kumgangatho wayo wemabhile, imigangatho yemarmore emenyezelweyo, iithayile zodonga zeceramic ezinesiphumo esinjengephepha lodonga, iintsika zefeksi kunye ne-niches, ilize elinemabhile, izipili zokuhlambela ezenziwe ngegolide kunye nebhafu enkulu, ngokuqinisekileyo uya kuziva ngathi ubukhosi xa uthe wangena le yangasese.
Le ndlu yangasese yakudala imalunga nemibala yegolide etyheli. Ukusuka kwimigangatho, ezindongeni, ebhafini ukuya kuthi xhaxhe ngesinki, uya kuqaphela ukuba le ndawo yokuhlambela ithanda ntoni ngemibala etyheli. Umgangatho ziitayile zamatye zendalo ezi-polished kwisimo se-Moroccan Arabesque, esinika ubuntu obuninzi sisodwa. Ukufakwa kwamatye endalo okugcotyiweyo ebhafini kunye ne-top of counter kungabonakala kusetyenziswa umthunzi ofanayo otyheli wegolide, kwaye iithayile zemosaic zisebenzisa iithoni ezityheli zegolide ngokunjalo.
Igumbi lokuhlambela elilula eliphefumlelwe yiAsia. Ungabona izincedisi zaseAsia zisetyenziswa njengobugcisa, ukuhombisa, kunye nezinto ezibonakalayo ezinje ngeshampoo, njl. Ukugxininisa ukubonakala kweAsia, iithayile zekherale ezinemibala yeJade zazisetyenziselwa indawo yokuhlambela kwaye ikwasebenzisa izinto zegolide ukufezekisa jonga. Indawo eseleyo yokuhlambela igcinwe kumbala we-beige ophantsi.
Le yindawo yokuhlambela entle kakhulu yangoku. Ishawa ibekwe ecaleni kocango olutyibilikayo oluya kwindawo evaliweyo enembonakalo yolwandle. Indawo yokuhlamba isebenzisa iithayile eziluhlaza ezilula ezindongeni zayo, kwaye uphumela ngaphandle, uya kuyibona ibhafu yokuhlambela kanye embindini wendawo yepatio, ejikelezwe kuphela yimizila yeenkuni ethe nkqo.
Le ndlu yangasese yanamhlanje inokufikelela ngokuthe ngqo kwigumbi lokulala elahlulwe kuphela kukuvula okukhulu, amakhethini omphetho kunye nomthunzi ojikelezayo. Ngaphakathi kwigumbi lokuhlambela eliphangaleleyo, ishawa kunye nebhafu ihlala kwikona nganye nganye. Iindonga zilula iithayile zekheram emhlophe kwaye iindonga zisebenzisa iithayile ezinombala we-beige ezinobubanzi obahlukeneyo ukunceda ukongeza iphethini entle eludongeni. Ukongeza, uya kubona ukusetyenziswa kwezibane ze-LED kwii-koves, zombini kwigumbi lokuhlambela nakwigumbi lokulala, ukunika uhlobo lwempembelelo yexesha elizayo.
Igumbi lokuhlambela elinendawo yokuphumla enendawo yendalo. Ibekwe kwipatiyo evulekileyo kwaye iphakanyisiwe, le bhafu yokuma yasimahla iya kukunceda uphumle kwaye ikuse kufutshane nendalo. Yayibekwe kumgangatho we teak wokuhombisa kwaye yayijikelezwe kungekho zindonga, kuphela iiposti zomthi kunye nendalo uqobo.
Indawo yokuhlambela yangoku ye-Ultra akufuneki ibe zizinto zonke ezimenyezelayo kunye nemiphetho elukhuni - ukwakheka kunye neepateni zamkelekile ukunika indawo ngakumbi ubuntu kunye nobukhulu, njengalo mzekelo. Uya kubona ukuthungwa okungafaniyo kweethayile zomgangatho omnyama kunye neendonga zekhonkrithi, kunye nephepha lodonga elityunjiweyo elibekwe kufutshane nendawo yeshawari. Kwindawo yeshawari ephakanyisiweyo eyahlulwe kancinci ukusuka kwigumbi lokuhlambela ngepaneli yeglasi ye-orenji, isebenzisa iithayile zeceramic ezibanzi ngombala otyheli, kwaye iyisebenzisela udonga lwendawo yokuhlamba, nayo.
Le ndlu yokuhlambela igxile ekusebenziseni izinto ezilula kodwa ezintle ukufezekisa uyilo oluhlanganisiweyo. Kule meko, uya kuqaphela ukuba iithayile ze-beige travertine zazisetyenziswa kumgangatho kunye nasezindongeni - into ebiza kakhulu. Ukongeza kancinci okwahlukileyo kwisithuba, iishelfu ezinamabala e-wengue zazisetyenziselwa ukugcina iitawuli kunye nongqameko oluncinci lwendawo engento.
Umahluko phakathi koNksk. kunye no-ms
Le ndlu yangasese incinci kancinci, kodwa ipateni eqhubekayo ethe tyaba esetyenziswe eludongeni nakwitayile yomgangatho inceda ukunika umbono wento yokuhlambela enkulu. Ekungeneni, uya kuqala ubone indawo engafakwanga iglasi-efakwe indawo yokuhlamba, kwaye ecaleni kwayo ibhafu yokuhlambela. Kwiindonga zayo kukho iithayile ezingwevu ezinoburhabaxa, imigangatho isebenzisa ipateni efanayo kunye nokuthambeka kweethayile zayo, kodwa imdaka endaweni engwevu kwaye ezinye iindonga zisebenzisa i-satin esezantsi engaphezulu yokugqiba ukukhanya kweethayile ze-quartz ze-beige.
Enye indlela yokuzisa ngaphandle ngaphakathi kukusetyenziswa kwezinto ezinomgangatho ongaphandle, njengakule meko, iithayile zelitye elinemibala emerald ezisetyenziselwa imigangatho. Oku kongeza iindidi ezinomdla zokuthambeka kunye neepateni zemigangatho, kwaye ikwabonelela ngemvakalelo yomhlaba ngakumbi kwisithuba. Ibhafu yokuma yasimahla ibekwe ecaleni kweefestile zobude bomgangatho, ikunika umbono omangalisayo ongaphandle ngelixa uncwina kwaye uphumle.
Igumbi lokuhlambela elilula langoku elisebenzisa ii-aksenti eziluhlaza-luhlaza ukunika indawo isibheno esihlaziyayo. Imigangatho isebenzisa i-Mahogany eqinileyo, ngelixa uninzi lweendonga zisebenzisa iithayile ezimhlophe ze-ceramic emhlophe ukuthoba ubomvu bemigangatho. Nokuba udonga oluxhomekeke eludongeni luxhonywe ngesiphelo esimhlophe esimhlophe ukuthintela ukungqubana kwemibala. Kwindawo yokuhlambela, uya kuqaphela imitya ethe tye yeetayile ze-aksenti kumbala oluhlaza okwesibhakabhaka kwaye unepateni enomdla ekhumbuza umphezulu wamanzi ephuli. Iipillow zomlomo kunye neekhethini zisebenzisa umbala ofanayo, ukunceda ukudibanisa ngaphezulu kwayo yonke imibala yesikimu.
Ubuhle beli gumbi lokuhlambela abukho kuphela kwizinto zalo ezintle, kodwa nangenxa yokusebenzisa ngokungoyikiyo imibala eqinileyo kunye nezicwangciso ezikhethekileyo zomgangatho. Ngelixa imigangatho iphambili kunye neendonga zisebenzisa iithayile zemabhile ezisisiseko kumbala we-beige-grey, uya kuqaphela ityhubhu ebomvu enesibindi ebomvu ebekwe embindini, apho udonga lwenza uxinzelelo lwesiqingatha setyhula ukulungiselela ityhubhu. Olu donga lusisetyhula lwambathiswe ngetayile enemibala eyenza iphatheni entle eyenziwe ngophuzi, iililac, iipurple kunye nokungwevu okumnyama.
Izibuko zinceda ukunika umbono wento enkulu, kwaye kulo mzekelo, isiphumo siyabonakaliswa. Nangona izibuko ezisetyenzisiweyo azikho kubude obuphantsi komgangatho ukuya phezulu, umgca oqhubekayo wesipili kuzo zonke iindonga zangasese usasebenza ngenjongo yokwandisa indawo. Oku kuyanceda ukuzisa ukukhanya okongezelelekileyo kwigumbi lokuhlambela kuthathelwa ingqalelo ukuba iithayile zeceramic ezimnyama ezingwevu zazisetyenziswa emgangathweni nasezindongeni, ngaphandle kodonga apho amampunge amhlophe achasene nokusebenzisa iithayile ezimhlophe ze-3D.
Uyilo lokuhlambela lulula kangaka kwaye luthe tye-phambili. Isebenzisa iithayile zelitye lentlabathi elikhazimlisiweyo kuyo yonke imigangatho kunye neendonga zangasese, zigxininisa ubuhle obulula bezinto. Indawo yeshawari ayivaliswanga ngokupheleleyo, kodwa inomgangatho weglasi ongaphantsi kobushushu kwiglasi phakathi kwendawo yokuhlamba kunye namampunge.
Le yenye indlu yokuhlambela encinci enomgangatho omncinci. Isebenzisa umbala omnyama omhlophe kunye nomhlophe, onceda ekugcineni igumbi lokuhlambela elisezantsi kodwa lihle. Kumgangatho nakwisiqingatha seendonga, kwakusetyenziswa iithayile ezinkulu ezimnyama zeceramic kunye neepateni eziziinkozo ezithe tyaba, ngelixa ezinye iindonga zisebenzisa ithayile ebukhulu bunye kodwa emhlophe kwaye inenkozo engaqapheleki kangako. Imibala emhlophe kunye neekhabhathi zithelekisa kakuhle neethayile ezimnyama phantsi nasemadongeni, zikhupha kwaye zigxininisa indawo zayo.
Ngelixa igumbi lokuhlambela ngokwalo lilula kakhulu kwaye linomncinci omncinci - imigangatho emhlophe eneendonga ezigqamileyo ezigqunywe kwiithayile zemibala eluhlaza, into enomdla kule ndawo yokuhlambela ibhafu ekhethekileyo. Le bhafu ibekwe kwisiseko seplanga esiqinileyo, kwaye ibhafu ngokwayo yenziwe ngeepaneli ezityebileyo zeglasi enomsindo, ityhila indawo yokuphumla eyenziwe ngomthi ngaphakathi ebhafini ukukunceda ukuba ungene kwindawo yokuphumla kunye nentofontofo ngaphakathi kwebhafu engqonge i-rater.
umama weehempe zomyeni
Le ndlu yangasese ilinga ngokudityaniswa kwezinto, imibala kunye nesicwangciso somgangatho / ubeko. Kwicala lasekunene indawo yeshawari enepaneli yeglasi egobileyo eyahlulahlula igumbi lokuhlambela lonke. Iindonga zayo zinxitywe kwiithayile ezingwevu kwaye zineethayile ezimnyama ezimnyama ezineepatheni zesilivere. Imigangatho ivela kwizinto ezenziwe ngomthi okwe-oki, kwaye yonke eminye imigangatho yokuhlambela isebenzisa iithayile ezimnyama ezingwevu ezingama-60 × 60. Udonga olwalubekwe into engento yeplanga kunye nekhabhathi yokuxhoma amanzi yayixhonyiwe kwiithayile zelitye lekalika zendalo, ukongeza ubume obungaphezulu kwesithuba kwaye kudityaniswe neepaneli zomthi ezinamabala e-Oak nezibane ezidityanisiweyo.
Ukusetyenziswa ngokukuko kwesithuba kuncede ukwandisa le ndawo yokuhlambela encinci kwaye yenze ukuba ibonakale inkulu. Ngelixa imigangatho kunye neendonga zilula kakhulu-zinxitywe kwiithayile ze-beige zegranite kwaye zisebenzisa iithayile ezimnyama ezimfusa kunye nodonga kwindonga yodonga, ukusetyenziswa kwezinto zomthi ezi-laminated ezenziwe ngomthi zanceda ukongeza ubuntu ngakumbi kwisithuba, kusinika isibheno esingaphezulu saseAsia.
Ekuqalekeni, le ndawo yokuhlambela inokudlula njengendawo emhlophe emhlophe, kodwa uya kuqaphela ukuba iindonga kunye nemigangatho enxitywe iithayile zeceramic ezifudumeleyo ezikhanyayo, zinika umahluko owoneleyo wemibala phakathi kwezinto ezimhlophe kunye neekhabhathi. Oku kunceda ukulungelelanisa ukupholisa kweetoni zayo ezimhlophe kwaye kuzise ithoni efudumeleyo kwisithuba, iyenze ibonakale yamkelekile.
Ilula kwaye intle, le ndlu yokuhlambela ineempawu ezilula zangoku kunye nobuhle beklasikhi yoyilo lwaseFrance. Kananjalo, indibaniselwano yabamhlophe kunye neekhrim zibonakala njengeyona indibaniselwano ifanelekileyo yemibala ukufezekisa ukujonga okunjalo. Isiqingatha seendonga sasinxibe iithayile ezinombala okhilimu, ngelixa isiqingatha sodonga sasipeyintwe ngombala omhlophe. Ikhabhathi epeyintiweyo yamampunge isebenzisa umbala wepeyinti omhlophe ukuyinika uhlobo lokujonga okudala, kwaye isipili esisetyenzisiweyo senziwe kwisakhelo esimhlophe esimhlophe.
Ukusetyenziswa kweentlobo ngeentlobo zeethoni ezingwevu kuyilo lwendlu yangasese kuyinika ukukhanya kunye nokukhanya okuthambileyo. Uninzi lweendonga zeendonga zipeyintwe ngombala ongwevu okhanyayo, ngaphandle kwendawo evaliweyo yokuhlambela esebenzisa imitya emincinci yeethayile zeceramic ezingwevu. Imigangatho yitoni efudumeleyo yemabhile emvi, inika isitshizi esithambileyo esithubeni, ngelixa ezinye izinto zokulungisa kunye neekhabhathi zimhlophe, umahluko owamkelekileyo kumphezulu ompunga ompunga.
Uyilo lokuhlambela lwamkela iipateni ezahlukeneyo kunye nezixhobo, ezenza uyilo olukhethekileyo nolunomdla kwigumbi lokuhlambela. Imigangatho isebenzisa iithayile ezithandwa ngumthi ezenza iphethini yeherringbone ejolise kwidayagon. Ezindongeni, uya kuqaphela iithayile ezingwevu eziluhlaza ezenza ipateni efana nesikali. Udonga apho ibhafu yokuma yasimahla ibibekwe ngokuchasene noko, isebenzisa isibuko esisezantsi-esilingini apho ungabona ilize leplanga eliqinileyo elisebenzisa iikhabhathi zamayeza esipili.
Ukukhethwa kwemibala kunye nezixhobo kule ndawo yokuhlambela kunika isibheno esinzima kwaye sinzima. Iindonga kunye nemigangatho zisebenzisa i-marble emdaka kwaye zisebenzisa iithayile zomda ezintsonkothileyo kumgangatho omnyama, omhlophe negolide. Ikhawuntari yokuncamathelisa eyakhelwe-ngaphakathi inxitywe ngegranite emdaka, kwaye isipili esisetyenzisiweyo siqingqiwe, sijikeleze kwaye sinezinto zentsimbi ekubonakala ngathi zidityaniswa neethayile zamatye endalo ezisetyenziswe ezindongeni zawo.
Lo ngomnye umzekelo wendawo yokuhlambela emhlophe yonke. Imigangatho kunye neendonga zigutyungelwe ngemarble ye-carrara, kwaye ezinye iindonga ezingatyhilelwanga ukufuma okuninzi zipeyintwe nje ngepeyinti emhlophe ebengezelayo. Yintoni eyenza le ndawo yokuhlambela yahluke kakhulu kukusetyenziswa kwezibane eziluhlaza ezifihlwe ngasemva kwezibuko, inika igumbi lokuhlambela lonke iblue blue endaweni yomhlophe nyulu.
I-Violet ngumbala odla ngokunxulunyaniswa nobukhosi, kwaye kwigumbi lokuhlambela elinombala omnyama njengale, kuyanceda ukongeza ubungakanani bendawo entle. Zonke iindonga zazinxitywe ngeethayile ezenziwe ngokhuni ngombala omnyama ongwevu, ngelixa imigangatho isebenzisa okwahlukileyo okushushu okungwevu kwimigangatho. Ukongeza laa touch ye-violet, into engento yayilaminishwe kwi-gloss violet ephezulu, ukongeza kwimitha ehambelana neetawuli kwigumbi.
Kuba iinkuni zizinto ezibuthathaka, ngakumbi xa ziveliswa ukufuma, iithayile zeceramic ezilinganisa inkangeleko yomthi yenye indlela efanelekileyo ukuba ufuna ukuba neetoni zomthi ofudumeleyo kuyilo lwakho lokuhlambela. Igumbi lokuhlambela lanamhlanje ligcina iindonga zalo ezimhlophe ezibengezelayo, ngelixa imigangatho kunye nesiqingatha seendonga zigutyungelwe ngeethayile zeceramic ezijolise nkqo kuyilo olufana nokhuni.
Eyona ndawo ithengiswayo kule ndawo yokuhlambela iya kuba yimifanekiso yayo emikhulu kwiindonga ezimbini ezinqamlezileyo. Ukubekwa kufutshane nekona yezi windows, ikunika umbono wazo zombini indawo yeepati enomgangatho wokhuni kunye nephuli encinci yokuntywila, kunye nelinye icala elibonakala ngathi lipatio kodwa lineendonga zamatye eziyigubungela ngasese. Umgangatho osetyenziswa kuloo patio uyafana nalowo usetyenziswa ngaphakathi kwigumbi lokuhlambela uqobo, usenza ukuba kubonakale ngathi yinxalenye yangaphandle.
Ilitye le-Quartz linika ubuhle obufanayo njengegranite, kodwa ijongeka ilula, eyenza ukuba ibe yinto efanelekileyo yokuhlamba yangoku. Kulo mzekelo webhubhu eyakhelweyo, uya kubona ukusetyenziswa okubanzi kwelitye le-quartz elikhanyayo kwiindonga zombini, ejikeleze ibhafu, ubuso bayo kwaye mhlawumbi nomgangatho.
Le yindawo yokuhlambela elula kakhulu, encinci encinci, kodwa iyahlawulwa kodwa inani lokukhanya elingena kwiwindow enkulu yemifanekiso ngebhafu yokuhlambela emileyo. Iindonga zisebenzisa iphepha lodonga ngombala omthubi ococekileyo ngelixa imigangatho imdaka emhlophe kwaye into engento ilula emhlophe. Iindonga eziluhlaza ezimthubi zibonakala zihambelana kakuhle nengca eyomileyo enokubonakala ngefestile. Ngaphandle kobukhulu bayo obuncinci, la magumbi okuhlambela azama ukwenza ibhafu yakho yokuhlambela izive ngathi 'inkulu' ngokubeka kwiqonga eliphakanyisiweyo, ngokubeka iikholamu ze-faux ze-faux kunye nokubeka umhombiso okroliweyo weklasi ukuwujikeleza. Iindonga kunye nemigangatho zinxityiswe ngobuhle kwimarmar emthubi, zisinika uhlobo lwesibheno esidala.
Umnyama odityaniswe nemithi eneetoni ezibomvu ugqibelele ngokwenene kwaye ukhupha isibheno sobudoda esikwanika nembonakalo yaseAsia. Ngenxa yoko ukudityaniswa kombala kwale ndawo yokuhlambela ikakhulu kumnyama (kufumaneka kwikhawuntara ye-vanity, amacala ebhafu, i-rack rack kunye neefestile zefestile) kunye ne-mahogany engumbala we-veneer yeplanga esetyenziswa ezindongeni.
Olu luyilo olulula kakhulu noludidi lokuhlambela olubeka ugxininiso lwayo kwibhafu. Njengoko ubona, uninzi lwezixhobo zintle zilula kwaye zitshixo esisezantsi, njengeethayile ezincinci ezimile yidayimani emigodini enamatye endalo ngombala okhanyayo otyheli, kunye nelitye elinombala ofanayo kwisiphelo se-satin esisetyenziselwa ukujikeleza ibhafu ephezulu . Amacala ebhafu ayegqunywe ngamaplanga axhonywe ngetoni ebomvu yeMahogany, kwaye umbala wawo omnyama unceda ukugxininisa umphezulu wamatye ojikeleze ityhubhu kunye nebhafu emhlophe uqobo.
Ngeefestile ezimbini ezinkulu, le ndawo yokuhlambela ngokuqinisekileyo iyakhanya kwaye ikhangeleka ngokuqaqambileyo, ngakumbi ngenxa yokukhetha imibala. Imigangatho, udonga kunye namacala kunye nomphezulu ojikelezayo webhafu yokuhlambela inxitywe ngokukhanya okulinganayo kweethayile zendalo ngamatye endalo. Ayikho eminye imibala kwigumbi lokuhlambela ngaphandle kwekhawuntara yeplanga ye-Maple / iishelufa zento engento, kwaye ngaphandle kokulula konke-konke, idala inkangeleko ekholisayo kwaye ekulula ukuyiphumeza.
Amagumbi okuhlambela aqaqambileyo akhangeleka ehlaziya kwaye kwangoko akhangeleka elungile ngaphandle kwesitayile kunye nezinto ezilula. Njengalo mzekelo, uya kubona ukuba kukho ifestile enkulu kakhulu yomfanekiso kanye ecaleni kwebhafu, ejonge indawo yedama. Ayaneli nje ukwenza igumbi lokuhlambela libonakale liqaqambile kwaye lihlaziya, kodwa likwanika umbono wokuba iibhafu zinwenwela echibini.
Le ndlu yokuhlambela igxininisa kwinto enye kwaye yeyona granite yodwa esetyenzisiweyo phantsi, ezindongeni nakwikhawuntari yamampunge. Kuba le granite imnyama ngemithambo emhlophe kunye neenkcukacha, le ndawo yokuhlambela incinci ekubukekeni okumnyama kunye nobudoda, kwaye iyancediswa ziikhabhathi ezimnyama zokugqibezela isipili ezisetyenziselwa ilize. Ngombulelo, indawo ikhanya kakuhle, ke ngaphandle kwezinto ezinombala omnyama, indawo iyaqaqamba ngokwaneleyo.
Ngenxa yokhetho lwesitayile sezinto kunye nombala, ezi zindlu zangasese zivakalelwa ngokungathi zilungile ngaphandle kwezindlu ezindala okanye amabhotwe. Uya kubona ukuba iithayile zeceramic ezisetyenziswe phantsi nasemadongeni zineethoni ezahlukeneyo, kodwa zijikeleze umbala we-beige-ezinye zityheli, zibomvu kwaye azithathi cala kunezinye. Ukhetho lombala sele luneemvakalelo ezindala kuwo, kodwa ubume / iphethini yeethayile ezisetyenzisiweyo nazo zinegalelo elikhulu ekufezekiseni oku kujongeka. Ibhafu yokuma esimahla esetyenzisiweyo kuyilo oluhambelana ngokuchanekileyo nomxholo, nawo.
Le ndlu yangasese inokuchazwa njengeqaqambileyo kwaye iyamema. Indawo encinci yokuhlambela ikhanya kakuhle, inelanga elininzi lendalo, esele liyenza ibonakale ikhanya. Ikwasebenzisa iithayile zomgangatho ezikhanyayo kakhulu ezinemigca emincinci ye-beige / grey ukuyinika ubume obuncinci kunye nokongeza ubukhulu kwindawo. Kukho izibuko ezibini ezinkulu ezingaphantsi kwesakhelo, kwaye phakathi kwazo kukho iphepha lodonga elimhlophe elisinyithi elinika iindonga ezimhlophe ukujija kancinci. Eyona nto imnyama kule ndawo yokuhlambela iya kuba ziidrafti ezinamampunge ezilaminethiweyo.
Amagumbi okuhlambela amhlophe onke anokuxhamla ekukhanyeni kwendalo okwaneleyo. Imibala emhlophe e-Flat ithande ukuba yinto encinci okanye ibe nelizwi elingaphantsi elinombala ongenza indawo yakho yokuhlambela ibonakale ibanda kwaye ingamemi, kodwa ukukhanya kwendalo kuyanceda ukuzisa ubushushu bendalo kwisithuba. Le ndlu yangasese yeyangoku, ineenkcukacha zepaneli ezilula kakhulu kumampunge nakwindawo yesipili. Ekuphela kwezinto ezimhlophe ezingasulungekanga iya kuba yikhawuntari yamatye e-quartz emhlophe engacacanga kunye nebhodi yokutshiza, kunye nomgangatho weenkuni wengue.
Oluvavanyo lokudibanisa imibala efudumeleyo kunye nezinto ezinemibala epholileyo, kwaye ngenxa yoko, idibanisa i-galaxy granite emnyama kunye nodonga lwe-cream beige. Uyakubona ukuba eli litye lomnye lomnyama lisetyenziswe phantsi, ikhawuntari ephezulu kwaye lijikeleze ibhafu linamabala amancinci aluhlaza, liyinike ithoni epholileyo kunethoni eqhelekileyo engathathi hlangothi, kwaye oku kuthelekiswa kakuhle nombala we-beige osetyenzisiweyo Iindonga.
Le ndlu yokuhlambela incinci kakhulu, kwaye ukuze ingakhange ibonakale incinci, isetyenzisiwe kwinto yonke kwigumbi lokuhlambela endaweni yokwahluka. Iithayile ezifanayo ezimnyama zeceramic ezinombala ocacileyo wobuso zazisetyenziswa kumgangatho osezantsi nasezindongeni, kodwa ukusebenzisa okuninzi okufanayo kwenza ukuba izindlu zangasese zibukeke zincinci, ke ukuze uzixube ngaphandle kokusebenzisa umbandela owahlukileyo. imathiriyeli yayisetyenziswa njenge-aksenti kunye nemida ezindongeni.
Into eyahlukileyo ngale ndawo yokuhlambela indibaniselwano yemabhile enezindonga ezimnyama ezingwevu / umphezulu. Ngokwesiqhelo, izinto zakudala ezinjengeemabhile zibhangqwe ngeendonga ezimhlophe, ezimnyama okanye ezityheli, kodwa kule meko, ziyidibanisa ngenkalipho ngombala okhethwayo wangoku, ongathathi hlangothi we-grey emnyama.
Uya kubona ukuba le ndawo yokuhlambela isebenzisa iithayile ezahlukeneyo zamatye endalo, ayithethi kuthi ngombala wosapho kunye nobungakanani. Oku kuyasetyenziswa kumgangatho kunye nasezindongeni, kwaye kungqonge ibhafu. Yintoni eyenza le ndawo yokuhlambela inomdla ngakumbi kukusetyenziswa kwepeyinti ebomvu ebomvu kwisiqingatha esiphezulu sodonga.
Le yindlu yokuhlambela enobungakanani obuqhelekileyo kunye nokhetho olulula kodwa oluthandekayo lwemibala kunye nezinto. Inamathela kwiziseko zodonga lwayo nakwimigangatho - iithayile zecaramic ezimhlophe ezingacacanga emigangatho nasezindongeni ezinombala omncinci, kunye nephepha lodonga elilinen ngombala omhlophe kakhulu ocacileyo ezindongeni ezingafakwanga kukufuma okuninzi. Ikhawuntari ye-vanity ilaminishwe kwimephu iyinika ithoni entle efudumeleyo etyheli, kwaye uyakuqaphela ukuba ukubekwa kwindawo ephantsi kwebhafu engenamanzi kunceda njani ukuphakamisa indawo yonke.
Le yenye igumbi lokuhlambela elisebenzisa iphalethi entle engathathi hlangothi, egxile kwi-beige kunye browns. Uyakubona ukuthungwa okungafaniyo kwemigangatho ye-beige esetyenzisiweyo ekhangeleka intle ngokuchasene neethayile zokhilimu ezilula ezisetyenziswa ezindongeni. Ukufakwa kwebhafu yokuhlanjwa kweethayile kukugqitywa kwe-oki yokugqiba, ukongeza into emnyama kwisithuba, kunye nokongeza kuhlobo lwendalo.
Le ndlu yangasese ilula kakhulu kwaye icacile, ubukhulu becala imhlophe. Kodwa yintoni enceda ukuphucula inkangeleko yegumbi lokuhlambela elincinci kukusetyenziswa kweWalnut eqinileyo kwento engeloncedo (kubandakanya ikhawuntala ephezulu) kunye nefascia yebhafu. Umbala wendalo wokhuni awongezi kuphela umbala ofudumeleyo kwisithuba kwaye uwunika ubume ngakumbi.
Le ndlu yangasese yanamhlanje ngokudibeneyo idibanisa imibala eyahlukeneyo kunye nezixhobo ukufezekisa oku kujongeka. Ukuqala kwizinto ezisisiseko, uyakuqaphela ukusetyenziswa kweethayile zekherale ezinombala wamalahle emigangatho kunye nodonga oluninzi. Oku kuseta ubumnyama kodwa, ongathathi hlangothi kunye nemvelaphi yangoku kuyilo. Iithayile ze-mosaic ze-beige ezisetyenziswa kwindawo yokuhlamba zisebenza njengezona zinto zikhaphukhaphu kwigumbi lokuhlambela kwaye zithomalalisa iithayile ezinemibala yamalahle, ngelixa iinkuni ezenziwe ngomthi zisetyenziselwa ukongeza ukubhenela kwendalo kunye nokuthambeka kwisithuba.
phezulu r & b iingoma zomtshato
Iifestile ezinkulu kunye neengcango zeglasi zanceda ukwenza lo mbala umbala omnyama usebenze kule ndawo yokuhlambela. Uya kubona ukuba isebenzisa amatye endalo kunye nokugqitywa kwendalo kumphezulu wendonga kunye nemigangatho, ngelixa indawo yokuhlambela isebenzisa iithayile zemibala kumbala omnyama wamalahle ezindongeni zayo ukunceda ukongeza iintlobo.
Ukukhethwa kokulungiswa, imibala kunye nezixhobo kule ndawo yokuhlambela encinci kuzimisele ukunika isibheno esihle kolu luyilo. Imibala emihlanu yeethayile zeceramic zisetyenzisiwe kuyilo, olukhanyayo olusezindongeni olusebenza njengodonga lweAccent kufutshane nebhafu, kulandele iithayile ezinoyilo lweentyatyambo ngasemva kwento engento, emva koko iithayile zomgangatho we-beige, kwaye ekugqibeleni , iithayile zodonga ezimdaka ezingathathi hlangothi kunye neethayile zomda. Indibaniselwano yee-browns isebenza kakuhle kunye kwaye inike indawo indawo yokujonga izinto zakudala, ngakumbi ngokudityaniswa nesitayile samampunge, isipili kunye nebhafu esetyenzisiweyo.
Uyilo lwegumbi lokulala Iingcamango ze3 - Uyilo oluMnyama oluMhlophe kunye noMhlophe - I-25 entle yoyilo lwegumbi lokuhlambela elimhlophe - Iingcamango zokuhlambela ngokwezifiso
imibono yomtshato yomyeni
isicakakazi sembeko yokwenza uluhlu
Ukuhamba ukusuka kuphoswa ukuya kuNksk
iikowuti zomtshato kunye namazwi
Iingoma zomdaniso zikabawo oyintombazana
intyatyambo yeentyatyambo kwintombazana yentyatyambo
iingoma eziphezulu zothando ngalo lonke ixesha